EPL: Rashford oo Rusheeyay Reds….+SAWIRRO – Gool FM
EPL: Rashford oo Rusheeyay Reds….+SAWIRRO
Liibaan Fantastic March 10, 2018
(Manchester) 10 Maarso 2018 Marcus Rashford ayaa guul muhiim ah farta ka saaray kooxdiisa Manchester United oo haatan 5-dhibic ka sara martay Liverpool.
Manchester United ayaa weerar aan kala joogsi lahayn kala hortagtay Liverpool bilowga qaybtii hore ee ciyaarta.
14 daqiiqo, Marcus Rashford ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Man United kadib markii uu shabaqa ku hubsaday kubadd uu ka helay Lukaku, wuxuuna kala cararay difaaca Liverpool, wuxuuna ka dhigay ciyaarta 1-0.
Ciyaartoyda Liverpool ayaa isku dayay inay soo barbareeyaan goolka, balse markale ayuu Marcus Rashford uga naxsaday gool kale ciyaarta oo aan gaarin daqiiqadii 25-aad.
Lukaku ayaa kubadd u dhigay Mata laakiin waxay ku dhacday mid kamid ah daafacyada Liverpool taas oo u tagtay Rashford oo shuud xoogan ku riday goolka, wuxuuna ka dhigay 2-0.
38-daqiiqo, Juan Mata ayaa ku dhawaaday inuu goolkii isbuuca u dhaliyo kooxdiisa Manchester United kadib markii uu labaaleey isla laabay, balse kubadda ayaa geesmartay birta.
Qaybtii hore ayaa ku soo idlaatay 2-0 oo ay hogaanka ku haysay Man United.
Qaybtii labaad, Liverpool ayaa samaysay wax walba oo ay gool ku dhalin kartay, kooxda tababare Klopp ayaa sidii ay doonato u maamulatay ciyaarta laakiin kubadd walba oo ay soo dhisaan waxay ku dhamaanaysay difaaca Man United.
66-daqiiqo, Eric Bailly ayaa gool ka dhaliyay kooxdiisa Manchester United kadib markii uu si qaldan u ciribeeyay kubadd uu soo karoosay Sadio Mane, natiijada ayaa noqotay 2-1.
Ciyaartoyda Liverpool ayaa wax walba sameeyay laakiin ciyaarta ayaa ugu danbayntii ku soo idlaatay 2-1 oo ay guushu ku raacday kooxda tababare Mourinho.
Ronaldo oo Markale ka Rageeyay Real Madrid….+SAWIRRO